शनिबार नगर्नु यी काम : संकटको सामना गर्नु पर्नेछ ! - MassiveKhabar
शनिबार नगर्नु यी काम : संकटको सामना गर्नु पर्नेछ !
एजेन्सी हिन्दु धर्ममा शनिबार शनिदेवको पूजा गरिन्छ । शनिदेवलाई न्यायको देवताको रुपमा पुजिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यो दिन सरसियौँको तेल, कालो तिल आदि चढाउने गरिन्छ । जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष भएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले शनिदेवको पूजा गर्नुका साथै शनिबारको दिन केही खानेकुरा पनि बार्नु पर्ने हुन्छ । शनिदोष भएका व्यक्तिले भूलेर पनि खान नहुने केही खाद्य वस्तुबारे जानकारी राखौँ।शनिबारको दिन सादा दूध तथा दही भूलेर पनि नखानु होला । खानै परे तपाईंले सादा दूध तथा दहीमा बेसार तथा सख्खर मिसाएर मात्रै खानु उपयुक्त हुनेछ ।
खाद्य वस्तुको कुरा गर्नुपर्दा तपाईंले शनिबारको दिन मसुरोको दाल नखानु होला । मसुरोको दालबाहेक अन्य दाल भने खान सक्नु हुनेछ । मसुरोको रङ्ग रातो हुने भएकाले यो मंगलसँग सम्बन्धित भएकाले शनिबारको दिन मसुरोको दाल खाए शनिमा क्रुर दृष्टि बढाउँछ ।आँपको अचार पनि शनिबारको दिन नखानु होला । आँपको अचार काँचो आँपबाट बनाइने हुनाले यसको स्वाद अमिलो तथा टर्रो हुन्छ । यस्तो स्वादको खाद्यवस्तु शनिदेवलाई मन पर्दैन । त्यसैले शनिबारको दिन यस्ता खानेकुराबाट टाढा रहेकै बेस हुनेछ ।
शनिबारको दिन खानामा रातो खुर्सानी प्रयोग नगर्नु होला । शनिदेवलाई खानामा रातो खुर्सानी प्रयोग गरेको मन पर्दैन । सुकेको तथा रातो खुर्सानी प्रयोग नगर्दा तपाईंलाई शनिबारको दिन लाभ मिल्नेछ ।शनिबारको दिन रक्सी तथा मद्य पानबाट बच्नु उपयुक्त हुनेछ । कुण्डलीमा शनि यदि राम्रो अवस्थामा छ भने पनि यो दिन रक्सी सेवन गरेको खण्डमा त्यसको असर उल्टो पर्न सक्छ ।
यसैगरी ज्योतिष शास्त्रका अनुसार अशुभ ग्रह, प्रतिकूल ग्रहयोगबाट बच्न शान्ति, दान, कवच धारण, रत्न धारण एवम् रुद्राक्ष धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो भए कुन ग्रहका कस्तो रुद्राक्ष धारण गर्ने त ? यो आलेखमा कुन ग्रहका लागि कस्तो रुद्राक्ष धारण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।सूर्यः सूर्यका लागि एकमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ । चन्द्रमाः चन्द्रमाका लागि दुईमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ । मंगलः मंगल ग्रहका लागि तीनमुखे एघारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
बुधः बुधका चारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ । बृहस्पतिः बृहस्पति ग्रहका लागि पाँचमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।शुक्रः शुक्र ग्रहका लागि छमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।शनिः शनि ग्रहका लागि सातमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
राहुः राहु ग्रहका लागि आठमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ । केतुः केतु ग्रहका लागि नौमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।अशुभ योगका बेला यस्ता रुद्राक्ष धारण गर्दा लाभदायक हुन्छ ।कालसर्प दोषः आठ एवम् नौमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।शकट योगः दुई एवम् दशमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
केमद्रुम योगः दुईमुखे रुद्राक्ष सेता धागोमा बाँधेर हरेक सोमबार लगाउन गर्नुहोस् ।ग्रहण योगः सूर्य ग्रहण योगका लागि एकमुखे, आठमुखे या नौमुखे रुद्राक्ष रातो धागोमा बाँधेर आइतबार लगाउने गर्नुहोस् । यस्तै चन्द्र ग्रहण योगका लागि दुईमुखे, आठमुखे, या नौमुखे रुद्राक्ष सेतो धागोमा बाँधेर लगाउने गर्नुहोस् । मंगल दोषः एघारमुखे रुद्राक्ष रातो धागोमा बाँधेर मंगलबारका दिन लगाउने गर्नुहोस् ।